Meizu 16s Pro enweworị ụbọchị mbupute ọrụ | Gam akporosis
Meizu 16s Pro enwegoro ụbọchị mbupute ọrụ
El Snapdragon 855 Plus na-adịbeghị anya ulo oru dị ka ntaghari ohuru nke Snapdragon 855 mbụ, SoC nke rutere na Disemba nke afọ gara aga. Chipset ohuru a putara na nso nso a; ọkachasị n’ọnwa Julaị nke afọ a, ụbọchị nke, rue taa, fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa. Kemgbe ahụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ agbanweela iji kwadebe ya na ọkọlọtọ ọhụrụ ha, dịka Xiaomi, dịka ọmụmaatụ, nke bidoro Black Shark 2 Pro ya na chipset a di ike Ịgba Cha Cha.
Asus abiala onye ozo choputara iji igwe eji eme ihe ohuru a, ya na ya Ekwentị ROGX 2, ngwaọrụ malitere ihe dị ka izu atọ gara aga ugbua. Otu nke ga-emezigharị ihe nhazi a bụ Meizu, ọ ga-eme ya na 16s Pro, mobile nke anyị ekpugheworị ụfọdụ n'ime njirimara ya na ikekwe ọ ga-abịa na ọhụrụ customization oyi akwa Flyme 8.
Meizu ekwenyela na ọ ga-eduzi a ihe omume mmemme nke a na-abịa August 28 iji gosi ma malite Meizu 16s Pro smartphone. A na-atụ anya na a ga-elekwasị anya na ngalaba egwuregwu ahụ, na atụmanya ndị a na-akwado site na njiri mara mma nke Snapdragon 855 Plus, nke kachasị nke ọma iji na-agba ụdị egwuregwu niile nwere oke mmiri karịa nke Snapdragon 855 nke amarala ogologo oge.
Meizu 16s Pro igba egbe mara ọkwa
Firmlọ ọrụ China ahụ akwadobeghị nkọwa ekwentị.Mana asịrị ejirilarị ụfọdụ isi okwu ya. Adighi nso nso akuko ekpughere na Meizu 16s Pro ga-abata dị ka nkwalite mbipute nke smartphone. Meizu 16 gbakwunyere afọ gara aga ma bụrụ ụdị 'Pro' nke ekwentị Meizu 16 nke ekwuputara na ọnwa ole na ole gara aga na China. N'ihi nke a, ị nwere ike ịkọ nkọ banyere ihe na-echere anyị maka njirimara nke igwe mkpanaka a na-eche ogologo oge ga-egosipụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu 16s Pro enwegoro ụbọchị mbupute ọrụ
Ekwuru na Nokia 5.2, 6.2 na 7.2 na IFA 2019
Emeela ka Realme 5 Pro rute na igwefoto quad azu nke 48 MP